तपाईं निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
जिing्गये एक पेशेवर निर्माता हो। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ।
तपाइँको प्याकिंग को शर्त के हो?
साधारणतया, मेशीन कोष्ठक द्वारा तय गरिएको छ, र तब प्याकएड प्लाईवुड मामला मा।
EXW, एफओबी, सीआईएफ, डीडीयू।
तपाईंको डिलिभरी समय कस्तो छ?
सामान्यतया, यो तपाइँको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त पछि to देखि weeks हप्ता लाग्नेछ। निर्दिष्ट वितरण समय आईटमहरू र तपाईंको अर्डरको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
T / T अग्रिम, 5निक्षेपको रूपमा ०%, र समाप्त 5डेलिभरी अघि ०% ब्यालेन्स भुक्तानी।
तपाईंले शेष रकम तिर्नु अघि हामी तपाईंलाई उत्पादनहरू र प्याकेजहरूको फोटोहरू देखाउनेछौं।
हो, हामीसँग डेलिभरी हुनु अघि १००% परीक्षण छ
तपाईंको कारखानाले गुणवत्ता नियन्त्रणको सन्दर्भमा कसरी गर्छ?
गुण प्राथमिकता हो। हामी सधैं सुरूदेखि नै उत्पादनको अन्त्यसम्म क्वालिटी कन्ट्रोललाई ठूलो महत्त्व दिन्छौं। प्रत्येक उत्पादन पूर्ण शृंखलाबद्ध हुनेछ र सावधानीपूर्वक परीक्षण गरीनेछ यो शिपमेंटको लागि प्याक गर्नु अघि।
ग्यारेन्टी कति लामो हुन्छ?
के हामी हाम्रो देशमा तपाइँको वितरक बन्न सक्छौं?
हो, हामी तपाईंलाई धेरै स्वागत गर्दछौं! थप विवरण छलफल हुनेछ यदि तपाईं हाम्रो एजेन्ट हुन चाहानुहुन्छ भने।
कसरी बिक्री पछि सेवा को बारेमा?
छिटो बिक्री पछि समर्थन। हाम्रा उत्पादनहरूको एक बर्षे वारंटी र नि: शुल्क स्थायी परामर्श सेवाहरू छन्।